HTC One M8 | Androidsis
HTC One ကို M8
Miguel Gaton | | HTC က, reviews
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအထူးပြုသတင်းစာအရ HTC One သည်အကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားချက်များနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီသည်အနိုင်ရသူဖြစ်သည်။ ထိုမင်းသည်သူနှင့်အတူပြန်လုပ်လိုသည် HTC One ကို M8.
ထိုသို့မတ်လ 25 ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပါတယ် ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီကြီး ၎င်း၏ကြယ်ပွင့် terminal အသစ်, ဒီဇိုင်းအတွက်ပြန်လုပ်တဲ့ကိရိယာကိုတင်ပြပေမယ့် ဒါဟာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမြင့်ဆုံးအကွာအဝေး၏တ ဦး တည်းကိုအောင်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။
1 HTC One နှင့်အတူတူဖြစ်သည်
2 Full HD resolution ဖြင့် ၁၂.၅ လက်မမျက်နှာပြင်
3 HTC One M801 အတွက် Qualcomm Snapdragon 8
4 UltraPixel နှင့်အတူ Duo ကင်မရာ
5 KitKat နှင့် HTC Sense HTC One M8 တွင်
HTC One နှင့်အတူတူဖြစ်သည်
အသစ်က HTC One M8 သည်၎င်း၏ယခင်ဒီဇိုင်းကိုထိန်းသိမ်းသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးပစ္စည်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်ဒီဇိုင်းနှင့်ကွဲပြားသော်လည်း၎င်း၏ယခင်ထက်အနည်းငယ်ပိုဝိုင်းသည်။
HTC One ကဲ့သို့ HTC One M8 အသစ်သည်၎င်းကိုဆွဲဆောင်ရန်လိုသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ပစ္စည်းများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကနည်းနည်းလျှောလို့ပေါ့.
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားရှိသော်လည်း HTC One M8 ၏တိုင်းတာမှုများနှင့်အလေးချိန်ကဒီကိရိယာကိုအလွန်ပေါ့ပါးသောဖုန်းဖြစ်စေသည်။ ပြီးတော့အမြင့် ၁၄၆.၃၆ မီလီမီတာ၊ အရှည် ၇၀.၆ နဲ့အကျယ် ၉.၃၅ မီလီမီတာပဲတိုင်းတာတယ် 160 ဂရမ် အလေးချိန်ပေါ့၊ ဒါကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါး terminal လုပ်ပါ
သူတို့ကတစ်ဖန်သူတို့ရဲ့မီးမောင်းထိုးပြ BoomSound ပီဤအရာသည်ဤကိရိယာကိုဂီတနှင့်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော option တစ်ခုဖြစ်စေသည်။ HTC မှလည်းယခင်မော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားအရည်အသွေးနှင့်စွမ်းအင်တိုးတက်မှုမှာ ၂၅% တိုးတက်မည်ဟုကတိပေးသည်။
သတိပြုရန်မှာ HTC ရှိယောက်ျားများသည် system interface တွင်ပေါ်လာမည့် navigation ခလုတ်များကိုဖယ်ရှားလိုက်သည်။ HTC One M8 အသစ်ကိုအရောင်သုံးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ မီးခိုးရောင်၊ ရွှေနှင့်ငွေ။
HTC မှစမတ်ဖုန်းအသစ်သည်၎င်း၏ယခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မျက်နှာပြင်ကိုတိုးပွားစေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် HTC One M8 အသစ်သည်aကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်5လက်မစူပါ LCD3panel ကို Full HD resolution (1,920 × 1,080 pixels) ရှိသည်။
၎င်းတွင်လူသိများသောကာကွယ်မှုလည်းပါဝင်သည် Corning Gorilla Glass ကို3လုံလောက်သောခုခံမှုထက်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုပိုမိုပေးသည်။
HTC One M801 အတွက် Qualcomm Snapdragon 8
ဒီဖုန်းရဲ့ပါးစပ်အောက်မှာ Processor ကိုတွေ့တယ် Qualcomm Snapdragon 801Snapdragon 600 ၏ကျေးဇူးကြောင့်ရိုက်နှက်ခဲ့သော၎င်း၏ယခင်နှင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောခြားနားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ 2.3GHz Core လေးခုနှင့် RAM memory 2GB ၏ကျေးဇူးကြောင့် Adreno 330 GPU ကိုပြောစရာမလိုဘဲ HTC One M8 အသစ်သည်ပိုးကဲ့သို့အလုပ်လုပ်လိမ့်မည် ။
ဥရောပဗားရှင်းတစ် ဦး ရပါလိမ့်မယ် 16GB Internal Memory, သိုလှောင်မှု 32GB နှင့်အတူအခြားမော်ဒယ်ရှိလိမ့်မည်ပေမယ့်။ ကံကောင်းတာကထိုင်ဝမ်အသင်းဟာသူတို့ရဲ့အမှားတွေဆီကနေသင်ခန်းစာယူပြီး terminal အသစ်မှာ micro SD card slot တစ်ခုပါ ၀ င်မှာဖြစ်ပြီး memory ကို 128GB အထိတိုးချဲ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၆၀၀ mAh ဘက်ထရီကိုတွေ့ရသည်၊ HTC One M2.600 ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်မျှတမှုရှိသည်။ သူတို့ကအားပြိုင်ဘက်များ၏ ၇၅% မြန်သောအားသွင်းစနစ်ကိုကတိပေးသည်။ SIM ကဒ်အထိုင်၏ဤကိစ္စတွင် nano SIM ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
UltraPixel နှင့်အတူ Duo ကင်မရာ
Taoyuan အခြေပြုထုတ်လုပ်သူသည်၎င်း၏ UltraPixel နည်းပညာကိုထောက်ခံသည်။ ဤကိစ္စတွင် HTC သည်နှစ်ခြင်းခံပြီးသည့်ကင်မရာနှစ်လုံးထည့်သွင်းထားသည် Duo ကင်မရာ အများဆုံး aperturef/4နှင့် 2.0 millimeters နှင့်အတူ 28 megapixels ၏အဓိကမှန်ဘီလူးပါဝင်သည်။
၎င်းသည်ကင်မရာနှစ်ဆဖြစ်သော်လည်း HTC ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရုပ်ပုံများကို 3D ၌ရိုက်ကူးရန်မဟုတ်ဘဲရိုက်ချက်များ၏အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယကင်မရာကတော့ဓါတ်ပုံစီမံခန့်ခွဲမှုကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့အတိမ်အနက်ကိုသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းတာပဲဖြစ်တယ်။ ငါတို့မေ့လို့မရဘူး ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောချစ်ပ် HTC ImageChip 2Sony ၏ BionZ နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံများအားလျင်မြန်စွာနှင့်တိကျစွာရိုက်ကူးနိုင်ပြီးဓာတ်ပုံများကိုမြန်ဆန်စွာရိုက်ကူးနိုင်စေသည်။
ဒါဟာအသစ်သောမီးမောင်းထိုးပြ HTC One ကို M8 ဗီဒီယိုများကိုနှေးနှေးဖြင့်အစစ်အမှန်အချိန်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခွင့်ပြုသည့်အပြင်မီလီစက္ကန့် ၃၀၀ အတွင်းဖမ်းယူခြင်းကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။ ရှေ့ကင်မရာသည် ပို၍ အရေးကြီးသည်ကို HTC ကသိသည်။ ထို့ကြောင့် 300p format ဖြင့်ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးနိုင်သောကျယ်ပြန့်သောထောင့်မှန်ဘီလူးနှင့်အတူ5megapixel ရှေ့မှန်ဘီလူးကိုထည့်သွင်းထားသည်။
KitKat နှင့် HTC Sense HTC One M8 တွင်
HTC တွင်ပုံမှန်အတိုင်း HTC One M8 အသစ်သည် Android 4.4.2 KitKat ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလွှာအောက်တွင်ပြုလိမ့်မည် HTC Sense ၄.၁ ။ Blinkfeed, လူသိများသောထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီကြီး၏သတင်းစုစည်းမှု၊ HTC Zoe သို့မဟုတ် Sense TV ကဲ့သို့သောအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများပြန်လာလိမ့်မည်။
HTC One M8 ၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုကိုအတည်ပြုလိုက်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် HTC မှကြယ်ပွင့် terminal အသစ်သည်Aprilပြီလလယ်တွင်၊ ၉.၉၉ ယူရိုစျေးနှုန်း.
၎င်းတွင် micro SD ကဒ်များအတွက်အထောက်အပံ့မရှိပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC One ကို M8
Android အတွက်တွစ်တာသည်အသုံးပြုသူများကိုဓာတ်ပုံများဖြင့် tag လုပ်ရန်နှင့်ဗားရှင်းအသစ်တွင်တစ်ချိန်တည်းတွင် upload များစွာကိုခွင့်ပြုသည်